Ku rakib Google Earth Ubuntu 18.04 iyo waxyaabaha ka soo baxa | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakib Google Earth on Ubuntu 18.04 iyo waxyaabo kale
Google Earth waa barnaamij ina siiya aduunyo dalwad ah taas oo kuu oggolaaneysa inaad u safarto meel kasta oo aad fariisato miiskaaga adigoo daawanaya sawirro badan oo sawir gacmeedyo ah, oo ku saleysan sawirrada dayax gacmeedka, sawirrada hawada laga qaado, macluumaadka juqraafiyeed ee moodooyinka xogta GIS ee adduunka oo dhan iyo moodellada kumbuyuutar-abuuray
Waad sahamin kartaa meelkasta oo dhulka ah xitaa 3D iyo sidoo kale dhulka. Waxaad sahamin kartaa dusha sare ee Dayaxa iyo Maarta, oo waxaad sahamin kartaa xiddigaha cirka habeenka.
Barnaamijka waxaa lagu abuuray magaca EarthViewer 3D shirkadda Keyhole Inc, oo ay maalgelisay Hay'adda Sirdoonka ee Dhexe. Shirkadda waxaa iibsaday Google 2004-tii iyadoo la qabsanaysa arjiga.
Barnaamijka waxaa laga heli karaa rukhsado kala duwan, laakiin nooca bilaashka ah ayaa ah kan ugu caansan, diyaar u ah qalabka mobilada, kiniiniyada iyo kombiyuutarada shaqsiga ah.
2 Sidee loo rakibaa Google Earth Ubuntu 18.04?
Astaamaha ugu waaweyn ee barnaamijkan ka mid ah, waxaan ku iftiimin karnaa inuu horeyba u lahaa khariidado 3D ah gebi ahaanba. Sidoo kale, gudaha "Voyager" tabka ku jira Google Earth, waad booqan kartaa boggag kala duwan oo ay shaacisay dhaxalka adduunka ee aadanaha ee UNESCO.
Muuqaal kale oo ka mid ah noocyadan cusub ee Google Earth ayaa ah shaqada 'Waxaan noqon doonaa nasiib', halkaas oo hal guji oo keliya, madalku u raro adeegsadaha meel aan kala sooc lahayn iyada oo ujeedadu tahay inaad kaa yaabiso. Kadib markaad gaarto meesha loo socdo, Google waxay siisaa socotadaada kaar macluumaad halkaas oo ay waxbadan kaga ogaan karaan geesta loo qaaday.
Isdhaxgalka Ingiriisiga, Isbaanishka, Faransiiska iyo Jarmalka.
La xiriir SketchUp, oo ah barnaamij lagula socdo 3D oo noocyada 3D ee dhismayaasha looga soo gudbin karo Google Earth.
Guddi xakameeya oo faragalin fara badan ku sameeya boosna ku soo bandhiga sawirada.
Hagaajinta ogolaanaya arag sawirrada "textured" 3D (dusha sare ee macquul ah, daaqadaha, lebenka ...)
Astaamaha Mars ee Google Earth, waxaad ku sameyn kartaa:
Eeg sawirrada ay soo dejisay NASA kaliya dhowr saacadood ka hor lakabka tooska ah ee ka imanaya Mars.
Aqoonsi booqasho is-dhexgal ah oo ku timaadda Mars.
Arag tusaalayaasha 3D ee gawaarida indha indheeyayaasha oo raac jidadkooda.
Ku qaado safarro hagitaan ah goobaha ay ku degayso, oo ay ka sheekeeyeen cirbixiyeennada Barnaamijka Apollo.
Eeg moodooyinka 3D ee maraakiibta hawlgalka hawada sare.
Sidee loo rakibaa Google Earth Ubuntu 18.04?
Si aad ugu rakibtid Google Earth kombiyuutaradayada waa inaan marka hore rakibno qaar ku tiirsanaanta kuwaas oo lagama maarmaan u ah hawlgalka barnaamijka kumbuyuutarka. Waa kuwee kuwa soo socda, kuwan waxaan ku raadin doonnaa taageerada Synaptic:
lsb-aan ansax ahayn-mta
Ama haddii aad doorbideyso waxaad ka sameyn kartaa saldhiga amarada soo socda:
In kasta oo laanta ugu weyn ee Ubuntu tahay 64-bit oo keliya, haddana noocyadeeda kala duwan sida Xubuntu ama Kubuntu waxay sii wadaan inay taageeraan nidaamyada 32-bit, sidaa darteed waxaan sidoo kale la wadaageynaa ku tiirsanaanta nidaamyadan.
Wixii ku saabsan nidaamyada 32-bitKahor intaadan bilaabin howsha, rakibi maktabadaha 32-bit ee barnaamijku u baahan yahay adoo ku qoraya amarka soo socda terminal.
Tan waxaan ku sameeyay haddaan ku soo dejino ku tiirsanaanta:
Hadda waa inaan tagnaa bogga rasmiga ah ee mashruuca oo aan kala soo baxno xirmada deynta ee ay na siinayaan, link waa kan.
Marka soo dejinta la dhammeeyo, waxaan ku rakibi karnaa arjiga maamulaha xirmooyinka aan door bidno ama haddii aad doorbido waxaad furi kartaa terminal oo aad ku fulin kartaa amarka soo socda:
Haddii loo baahdo, ku rakib barnaamijka ku tiirsanaanta amarka:
Tanna waxaan ku haysan doonnaa barnaamijka ku rakiban nidaamkayaga, waa inaan ka raadinnaa oo keliya menu-keena arjiga, waa inay xusuusnaadaan inay ka faa'iideysan karaan 7-da maalmood ee bilaashka ah ee Google ay bixiso si ay u tijaabiso howlaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku rakib Google Earth on Ubuntu 18.04 iyo waxyaabo kale
"Google Earth waa barnaamij aan tijaabiyey ..."
Waxaan u maleynayaa inay tahay qalad uu keenay khalad toos ah, laakiin halkaas waa inay ku dhigtaa "wax"
Ku jawaab Eskorpio
Cosme guevara dijo
Waad salaaman tahay, waxaan sameeyay dhamaan talaabooyinka si aan ugu rakibo Google Earth Ubuntu 18.04, kani waa Icon laakiin maheli karo inuu socdo, mahadsanid iyo salaan
Ku jawaab Cosme Guevara
Waad ku mahadsantahay qoraalka !! Waxaan raacay talaabooyinka oo si fiican ayey u shaqeysaa.
Adolfo Hernandez dijo
Cinwaanada ku-tiirsanaanta waxay siinayaan Cilad 404, sinaba uma noqon doonto inaad sii eegto
Jawaab Adolfo Hernández
Ku rakib VirtualBox Ubuntu 18.04 LTS iyo derivatives
Qaar ka mid ah Amarada Aasaasiga ah Qofkasta oo Newbie ah waa inuu barto